मुस्ताङमा बन्यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो र अग्लो ढुंगाको बुद्धमूर्ति - hamro Desh
मुस्ताङमा बन्यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो र अग्लो ढुंगाको बुद्धमूर्ति
हिन्दु र बौद्धधर्मालम्बीहरुको पवित्र स्थलका रुपमा परिचित मुस्ताङको मुक्तिनाथमा हिन्दुमन्दिरको नजिकै नेपालको सबैभन्दा ठूलो ढुंगाको बुद्धमूर्तिको धार्मिक अनावरण गरिएको छ । अमेरिका निवासी व्यवसायी सोनाम लामाको एकल पहल र झण्डै ४ करोड रुपैयाको लगानीमा स्थापित बुद्धमूर्तीको धार्मिक विधिपूर्वक अनावरण गरिएको हो ।
बुद्धमूर्ति अनावरणका क्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुस्ताङका राजारानी, बौद्ध धर्मगुरुहरु लगायतको उपस्थीति रहेको थियो । सुरुमा २ करोडको लगानीमा बुद्धमूर्ति स्थापनाको कार्यपूरा हुने अपेक्षा गरिएपनि लागतखर्च झण्डै ४ करोड पुग्ने सोनाम लामाले जानकारी दिए ।
मुक्तिनाथ सोनामा लामाको आफ्नो जन्मस्थान हो । उनी सन् १९६१ म अहिलेको मुक्तिनाथ गाविस १, पुराङमा जन्मिएका थिए । १६ बर्षसम्म गाउँमा बिताएका उनी झण्डै २२ बर्षदेखि अमेरिकामा रहेका छन् । एनआरएन आईसीसीका तर्फबाट अमेरिका क्षेत्रका लागि संयोजक भइसकेका लामा अमेरिकामा एक सफल व्यवसायी हुन् ।
३५ फिट अग्लो यो बुद्धमूर्ती सन् २०१३ बाट निर्माण सुरु गरिएको हो । जसको तौल ६० हजार किलो भन्दा धेरै रहेको छ । हिन्दुहरुले मुक्तिनाथलाई मुक्तिक्षेत्रका रुपमा लिइन्छ भने भगवान विष्णुको पावन क्षेत्रका रुपमा पुज्ने गरिन्छ । सतीदेवीको अंग पतन भएको शक्तिपीठका रुपमा समेत दर्शन गरिने मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई बौद्धगुरु रिन्पोछे पद्मसम्भव तिब्बततिर यात्रा गर्ने क्रममा ध्यान गरेको पवित्र क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।
मुक्तिनाथमा स्थापना गरिएको बुद्धको मूर्ति काठमाडौंको पाटनमा निर्माण गरिएको हो । चर्चित नेपाली मूर्तिकार धर्मराज शाक्यको डिजाइन र उनका भाई उत्तम शाक्यको सहडिजाइनमा बुद्धमूर्ति निर्माणका लागि २० जना भन्दा धेरै कालिगढहरु संलग्न रहेका थिए । डिजाइनर शाक्यबन्धु दुबैजना मूर्तिकलामा स्नातकोत्तर हुन् ।
बुद्धमूर्ति बनाउन मात्र तीनबर्ष – बुद्धमूर्ती निर्माणको काम सन् २०१३ को अप्रिलमा सुरु गरिएको थियो । सन् २०१३ मा नै तत्कालिन पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले बुद्धमूर्ती स्थापनास्थलको शिलन्यास गरेका थिए । त्यसपछि फर्पिङबाट ल्याइएको विशेषप्रकारको ढुंगाबाट मूर्ति निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो ।
सन् २०१५ को अप्रिलमा नेपालमा आएको महाभूकम्पले बुद्धमूर्ति निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित पार्यो । कालिगढहरुले बुद्धमूर्ति कुँदिरहँदा आएको भूकम्पले बनिसकेको मूर्तिलाई भत्काइदियो । भागदौडमा केही कालिगढ घाइते समेत भए । भूकम्पका कारण मूर्ति निर्माणको काम ढिलो हुन पुग्यो ।
मूर्ति निर्माणको काम सन् २०१५ को मे महिनातिर सकाउने योजना थियो । तर भूकम्पले निर्माणको काममात्र प्रभावित भएन, बनिसकेको मूर्ति समेत भत्कियो । जसका कारण मूर्ति निर्माणको काम झण्डै ६ महिना ढिलो हुन पुग्यो ।
६० हजार किलोको मूर्ति १३ वटा ट्रकमा– पाटनमा मूर्ति निर्माणको काम सन् २०१५ को अक्टोबरमा पूरा भइसकेको थियो । तर पाटनबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथमा मूर्ति ल्याउन सहज थिएन । त्यसैले निर्माण भइसकेपछि पनि मूर्ति मुक्तिनाथसम्म ल्याउन झण्डै ६ महिना लाग्यो । सन् २०१६ को मार्चमा १३ वटा मालबाहक ट्रकमा राखेर बुद्धमूर्ति मुक्तिनाथमा लगियो । ६० हजार किलोको मूर्तीलाई ट्रकमा लोड गरेर दुर्गम क्षेत्र मुक्तिनाथमा ल्याउन सहज थिएन ।
ट्रकमा बुद्धमूर्ती लोड गर्दा निकै कठिन भयो । बुद्धको टाउकोमात्र लोड गर्न १५ जनालाई दिनभर लागेको थियो । टाउको एउटै ढिक्का भएकाले बनाउने क्रममा समेत टाउको उठाउँदा ८ इन्चको हाइबिम नै बाँगिएको थियो ।
बुद्धमूर्तिमा टाउकोमात्र पाँच फिट अग्लो रहेको छ । टाउकोको तौलमात्र झण्डै ५ हजार किलोको रहेको छ । टाउकोमाथि डेढ फिट अग्लो मुकुट रहेको छ । बुद्धमूर्तिको पाखुराको लम्बाई ९ फिट र चौडाई १८ इन्च रहेको छ ।
नेपालकै कलाकार र नेपालकै ढुंगाबाट परम्परागत शैलीमा छिना र हम्मरको प्रयोग गरेर मूर्ति बनाइएको हो ।
सबैभन्दा अग्लो स्थानमा ठूलो ढुंगाको बुद्धमूर्ति – मुस्ताङको मुक्तिनाथमा बुद्धमूर्ति स्थापना गरिएको स्थल १२ हजार ६ सय फिटको उचाईमा रहेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा स्थापित सबैभन्दा ठूलो ढुंगाको बुद्धमूर्ति हो । संसारको सबैभन्दा ठूलो पत्थरको बुद्धमूर्ति चिनको शिचुवान प्रान्तमा रहेको छ, जुन ७१ मिटर अग्लो रहेको छ ।
नेपालमा भने पहिलोपटक यति ठूलो बुद्धमूर्ति मुस्ताङको मुक्तिनाथमा स्थापना गरिएको हो । नेपालमा सिमेन्टका बुद्धमूर्ति त यो भन्दा ठूलापनि छन् । तर पत्थरबाट बनाइएको बुद्धमूर्ति यो नै सबैभन्दा ठूलो हो । स्थापना गरिएको क्षेत्रको उचाईका हिसाबले हेर्ने हो भने यो संभवत यति अग्लो स्थानमा गरिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पत्थरको बुद्धमूर्ति हो ।
बुद्ध नेपालमा जन्मेको सन्देश– मुक्तिनाथमा स्थापना गरिएको बुद्धमूर्ति शाक्यमुनी बुद्धको मूर्ति हो । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका बुद्धको मूर्ति नै मुक्तिनाथमा स्थापना गरिएको हो । मूर्तिमा बुद्ध भूमीस्पर्स मुद्रामा रहेका छन् ।
बुद्धमूर्तिका स्थापनाकार सोनाम लामा भन्छन् —‘शाक्यमुनी बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो । तिनै बुद्धको मूर्ति मुक्तिनाथमा स्थापना गरेर हामीले नेपालको अग्लो स्थानबाट बुद्ध नेपालमा जन्मेको सन्देश विश्वभर फैलाउन चाहेका हौं ।’
लुम्बिनीबाट मुक्तिनाथसम्म– मुक्तिनाथमा बुद्धमूर्ति स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताउँछन् सोनाम लामा । हिन्दुहरुको पवित्र धर्मस्थल मुक्तिनाथमा वर्षेनी हजारौं हिन्दु तिर्थयात्रीहरु आउने गर्छन् । तर यो क्षेत्र बौद्धधर्मालम्बीहरुको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो । हिन्दुहरुको पवित्र धर्मस्थल मुक्तिनाथलाई बौद्धधर्मालम्बीहरुले नै संरक्षण गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म धार्मिक पर्यटनस्थलका रुपमा हिन्दु धर्मालम्बी पर्यटकहरु बढीमात्रामा आउने गरेपनि बुद्धमूर्तिको स्थापनापछि बौद्ध धर्मालम्बी पर्यटकहरु पनि यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनस्थलको रुपमा आउने लामाको विश्वास छ ।
सोनाम लामा भन्छन् —‘हिन्दुधर्मालम्बीहरु पशुपतिनाथको दर्शनपछि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आउने गर्छन् । त्यसैगरी बौद्धधर्मालम्बीहरु लुम्बिनीको दर्शनपछि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आउने वातावरण बनाउन बुद्धमूर्तिको स्थापना गरिएको हो । यसबाट धार्मिक पर्यटकहरुमात्र होइन, घुमफिर गर्नमात्र आउने पर्यटकको संख्या समेत बढ्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’
मुक्तिनाथ क्षेत्रलगायत मुस्ताङ जिल्लामा धार्मिक पर्यटनका हिसाबलेमात्र नभई ठूलो संख्यामा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरु घुमफिर र टे्रकिङका लागि समेत आउने गर्दछन् ।
बौद्धमूर्तिको अनावरण धार्मिक विधिपूर्वक भइसकेपनि आगामी बुद्धजयन्तीको अवशरमा विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको छ । लामो समयसम्म टिक्ने बनाउनका लागि ढुंगाको बुद्धमूर्ति स्थापना गर्न लागेको सोनाम लामाको भनाई छ । उनका अनुशार यो मूर्ति सयौं बर्षसम्म टिक्ने हिसाबले बनाइएको छ ।
अमेरिका निवासी व्यवसायी सोनाम लामा
मूर्ति स्थापनास्थल आफैमा भ्यूप्वाइन्ट -मूर्ति स्थापनास्थल आफैमा एउटा भ्यूप्वाइन्टका रुपमा रहेको छ । जताबाट पनि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आउँदै गर्दा यो मूर्ति देख्न सकिन्छ भने मूर्ति भएको स्थलबाट मुस्ताङको सौन्दर्य अवलोकन गर्न सकिनेछ । धौलागिरी र निलगिरी लगायतका हिमालका साथै कोरला जाने बाटो र उपल्लो मुस्तांग जाने बाटोको दृश्य पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ । साथै मुस्ताङका आधादर्जन पूरातात्विक गाँउहरु पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ । मुक्तिनाथ विकाश समितिको दुई रोपनी जग्गामा बुद्धमूर्ति स्थापना गरिएको छ ।
मुक्तिनाथको महत्व– मुक्तिनाथ हिन्दू तथा बौद्धमार्गीहरूको लागि एक महत्वपूर्ण तिर्थस्थल हो । यस मन्दिरलाई हिन्दूहरूले मुक्ति क्षेत्र तथा बौद्धमार्गीहरूले तिब्बती भाषामा छुमिङ ग्यात्सा (सय पानी) भन्दछन् । तिब्बती बौद्धमार्गीहरूका २४ तान्त्रिक स्थानहरू मध्ये यो पनि एक हो ।
मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदायको पनि प्रमुख मन्दिरहरू मध्ये एक हो । यो तिर्थस्थल शालिग्राम भगवानको लागि प्रसिद्ध रहेको छ । शालिग्रामलाई बिष्णुको स्वरुपका रुपमा हिन्दू धर्ममा पुजनिय मानिन्छ । जस क्षेत्रमा मुक्तिनाथ अवस्थित छ त्यस ठाउँलाई मुक्तिक्षेत्रको नामले चिनिन्छ । हिन्दु धार्मिक मान्यताको आधारमा यो यस्तो क्षेत्र हो,जहाँ मानिसहरुलाई मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त हुन्छ । मुक्तिनाथको यात्रा जटिल रहेको छ तैपनि हजारौ संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बी यहाँ तिर्थ गर्नका लागि आउने गरेको पाइन्छ । यो हिन्दु धर्मको दुर्गम तिर्थस्थल मध्ये एक हो ।
मुक्तिनाथ १०८ दिव्य देशहरूमा एक स्थान हो । यो दिव्य देश वैष्णवहरूको पवित्र मन्दिर हो । पारम्परिक रूपमा भगवान विष्णुको शालिग्राम शिलाको रूपमा पूजा गरिन्छ । यस शिलाको निर्माण यस्तो प्रागैतिहासिक कालमा पाइने किराको जीवाश्मबाट भएको थियो, जो मुख्यत टेथिस सागरमा पाइन्थे । जहाँ टेथिस सागर अवस्थित थियो त्यहाँ अब हिमालय पर्वत छ । पौराणिक मान्यताहरूका अनुसार शालिग्राम शिलामा विष्णुको निवास हुन्छ ।
मुक्तिनाथ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागी पनि एक महत्वपूर्ण स्थान हो । यसै ठाउँको बाटो भएर उत्तरीपश्चिमी क्षेत्रका महान बौद्ध भिक्षु पद्मसम्भव बौद्ध धर्मको प्रचारप्रसारका लागी तिब्बत गएका थिए । यस क्षेत्रमा पद्मसम्भवका पाइला समेत देख्न सकिन्छ ।
वि. सं. २०६२ सालको मंसिर महिनामा मुक्तिनाथका पिठाधिश्वर कमलनयन आचार्य लगायत लाखौं नेपाली भक्तजनहरूले नेपाललाई तत्कालिन दन्द्वबाट मुक्ति मिलोस् भनेर मुक्तिनाथका १०८ शालिग्रामलाई हरिद्वारमा लगेर गंगाको तटमा सवालाख गाइको दूधले नुहाएर सवाकरोड बत्ती बाली पूजा गरेका थिए । यसरी सवा लाख गाईको दूधले शालिग्राम नुहाएको समयमा गंगाजीको पानी पुरै सेतो देखिएको थियो भने सवा करोड बत्ती बालेको समयमा रातीमा पनि पुरै गंगाको तट दिनको उज्यालो झैं झिलिमिली देखिएको थियो र शहर भरी घिउको बत्ति बालेको वसना फैलिएको थियो । मुक्तिनाथको पूजालगत्तै लामो समयसम्म चलेको गृहयुद्वबाट नेपालले मुक्ति पाएको थियो । – खसोखासबाट